ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားအတွက် ပေတံလေးချောင်း – Min Thayt
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုတာ ဟိုစပ်စပ်၊ ဒီစပ်စပ်သမား မဟုတ်ဘူး။
အပေါ်ယံရှပ်ပြေး သိထားသူလည်း မဟုတ်ဘူး။
သီအိုရီနဲ့ လက်တွေ့ကို ပေါင်းစပ်နိုင်သူ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို တော်တာ်များများ ကြားဖူးလိမ့်မယ်။ ပြောလည်းပြောဖူးလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် အနက်သဘောကိုမေးရင်၊ သေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ထားသူ နည်းလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လို့ ပြောပေမယ့် အနက်သဘောကို တိတိကျကျနားမလည်ထားရင် ယောင်ဝါးဖြစ်နေမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်နားလည်ထားတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အနက်ဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မြန်မာလို့ အသံဖလှယ်ပြီးတော့ တိုက်ရိုက်သုံးကြတယ်။ သူ့ကို အနက်ပြန်ရင် တစ်ချက်တည်းနဲ့ မလုံလောက်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခြုံငုံပြီးတိတိကျကျ စကားလုံးဝေါဟာရနဲ့ ပြောနိုင်ဖို့ နည်းနည်း ခက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကို မြန်မာလို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လို့ပဲ တိုက်ရိုက်သုံးလိုက်တာများတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်တယ်ဖြစ်ဖို့ အချက် (၄) ချက်လိုတယ်။ သည်အချက် (၄) ချက်နဲ့ ကိုက်ညီနေမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသတယ်လို့ ဆိုနိုင်မယ်။
• ကျင့်ဝတ် နဲ့
• ငွေကြေးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုပြီး စကားလုံးတစ်လုံးတည်း ပြောလိုက်လို့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျနော်က ပေါက်မြောက်မှုကို တွဲပြီး သုံးချင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာ သာမန်သဘောသာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်မြောက်မှုဆိုတာကတော့ ကိုယ်လိုသူလို ကျွမ်းကျင်သူများအကြားမှာ ခေါင်းတစ်လုံးသာတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖြစ်ဖို့ သာမန် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ထားမှုထက် ပိုရမယ်။ ပိုသင့်တယ်။ ပိုမှလည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သူလိုကိုယ်လို သားရဲတွေကြားမှာ လက်မ,ထောင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆတယ်။
ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိရင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ကို မရဘူး။ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုတာ ဟိုစပ်စပ်၊ ဒီစပ်စပ်သမား မဟုတ်ဘူး။ ယောင်ဝါးလည်း မဟုတ်ဘူး။ အပေါ်ယံရှပ်ပြေး သိထားသူလည်း မဟုတ်ဘူး။ နက်နက်နဲနဲ လေ့လာထားတဲ့သူ။ ထုသားပေသားကျအောင် လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူ။ သီအိုရီနဲ့ လက်တွေ့ကို ပေါင်းစပ်နိုင်သူ။ သီအိုရီကို အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် ရွတ်တတ်ဖတ်တတ်တာနဲ့ ပရော် ဖက်ရှင်နယ်လို့ ပြောလို့ မရဘူး။ ပြောလို့ရရင်တောင် “ရွတ်ဖတ်ခြင်းမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်” ဖြစ်တယ်လို့ပဲ ပြော နိုင်မယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှန်ရင် လက်တွေ့လုပ်နိုင်ရမယ်။ သင်ကြားမှုကို လက်တွေ့နဲ့သက်သေပြထားနိုင်သူ ဖြစ်ရမယ်။ လက်တွေ့မှာ ကျွမ်းကျင်ပြီး သီအိုရီနားမလည်ထားရင်လည်း ပရော်ဖက်ရှယ်နယ် ချို့တဲ့နိုင်ပါတယ်။
စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာမှုဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ် နန်းစံသက် မြင့်အောင် လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားဆိုတာ တစ်ပွဲထိုး မဟုတ်ဘူး။ ကောက်ရိုးမီးလည်း မဟုတ်ရဘူး။ ကမ္ဘာစံချိန်ချိုးတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့က ခက်ပါတယ်။ စံချိန်ကျိုးအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လည်း ခက်ပါ တယ်။ ချန်ပီယံအဖြစ်ကို ကာလရှည်ကြာထိန်းထားနိုင်ဖို့က ပိုခက်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားဆိုတာ နယ်ပယ်တစ်ခုခုမှာ ရှိနေပါတယ်။ အဲသည့်နယ်ပယ်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက် တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ တန်းသူ၊ ယှဉ်ဘက်သမားတွေ ရှိတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားဟာ ယှဉ်ပြိုင်၊ အနိုင်ယူရတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ်အမြဲ,သ နေမှ ရမယ်။ ဒါမှပရော်ဖက်ရှင်နယ် သက်တမ်း ကြာညောင်းမယ်။ အမှန်ဆိုရင်တော့ ခဏတစ်ဖြုတ် မင်းမူဖူးတာကလွဲလို့ သိပ်များများစားစားပြော နိုင်မယ် မဟုတ်ပါ။
ကိုယ့်နယ်ပယ်မှာ အသစ်အသစ်ပေါ်လာတဲ့ နည်းနာအသစ်၊ သီအိုရီအသစ်၊ လုပ်ငန်းအသစ်တွေကို ထပ်တိုး ထပ်တိုးပြီး လေ့လာနေမှကောင်းမယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူခြင်းဟာ ပညာကို အမြဲတိုးအောင်လုပ်နေ ခြင်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ,သ နေခြင်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဓားကို အမြဲသွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ သွေးလို့ ထက်ရင်လည်း အမြဲအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ သုံးခြင်းနဲ့ သ,ခြင်းကို အတွဲညီညီလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလူ ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားအဖြစ် ကာလရှည်ကြာ ရပ်တည်နိုင်တယ်။
အဲသည်လိုမှ မဟုတ်ရင် ‘တစ်ချိန်က ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တာကို’ တဖွဖွပြန်ပြောပြီး ပါးစပ်အာသာဖြေနိုင်ရုံသက် သက် မျှသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွမ်းကျင်မှုမှာ ကျင့်ဝတ်မပါရင်၊ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးပြစ်များတတ်တယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားတစ် ယောက်ရဲ့တာဝန်ဟာ ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို အကျိုးပြုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကျွမ်းကျင်မှုကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက လိုအပ်နေသူ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် သူ့ကျွမ်းကျင်မှုကို ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကျွမ်းကျင်မှုကို သူကိုယ်တိုင် အမြဲဖြည့်စည်းနေတတ်ပြီး သူ့ကျွမ်းကျင်မှုကို နေရာမှန်မှာအသုံး ချသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမား တစ်ယောက်ဟာ သူရှိနေတဲ့ နယ်ပယ်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို စောင့်ထိန်းရမယ်။ လိုက်နာ ရမယ်။ ဆရာဝန်မှာလည်း ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်။ အင်ဂျင်နီယာမှာလည်း ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားမှာလည်း ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်။ ကျောင်းဆရာမှာလည်း ကျင့်ဝတ်ရှိတယ်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုတာ ရေးသားပြဌာန်းထားတာ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါမယ်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကို ဥပဒေ စည်းမျဉ်းလို အတင်း အကြပ် လိုက်နာစေလို့ မရပါဘူး။ သတိပေးခြင်း၊ အသိပေးခြင်းအနေနဲ့သာ လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်ဆို တာဟာ လိုက်နာသူအပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်ကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မှာ မူတည်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားဟာ ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ငွေကြေးကို ရှာလို့ ရတယ်။ ရှာလည်း ရှာရပါမယ်။ ကိုယ့်ရတဲ့ ငွေဟာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကနေ ရတာဖြစ်ပေမယ့် ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ငွေကို ပုံပေးပြီး ကိုယ့်ကျွမ်း ကျင်မှုကို ဝယ်ယူခံရတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကို နင်းခြေပြီး ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှုကို ရောင်းပစ်လိုက်တယ်။ ဒီလိုလူမျိုးကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားတွေထဲမှာ ကျင့်ဝတ်ကို နင်းခြေပြီး ငွေနောက် တစ်ကောက်ကောက်လိုက်သွားသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေကို သူတို့အလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲကျွမ်းကျင်ပေါက်မြောက်နေပါစေ….. ပရော်ဖက်ရှင် နယ်စာရင်းထဲမှာ မထည့်ချင်ပါဘူး။
လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ငွေကြေးလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ လက်တွေ့ကျကျပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမား တစ်ယောက် လို့ ပြောနိုင်ဖို့အတွက် ဒီအချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ လက်တွေ့ကျတဲ့ အချက်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်သမားတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကနေ ကိုယ့်ဘဝရပ်တည်ဖို့ လုံလောက်သော ငွေကြေးရရှိရ ပါမယ်။ မတန်တဆ များပြားတဲ့ ငွေကြေး၊ သို့မဟုတ် ဉာဏ်ပူဇော်ခ ကို မျှော်လင့်တောင့်တခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ကနေ ကိုယ့်ဘဝရပ်တည်နိုင်ဖို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စဟာ အတော်အငြင်းပွားစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့က လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်လို့ ဝင်ငွေနိမ့်ကြ တယ်။ တချို့က ကျွမ်းကျင်မှုဟာ အံ့ဝင်ခွင်ကျမဖြစ်သေးလို့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အကျိုးအမြတ် မရကြဘူး။ တချို့က လုပ်ငန်းလည်းကျွမ်းကျင်ပါလျက်နဲ့၊ မပျင်းမရိ အားထုတ်မှုလည်း ရှိပါလျက်နဲ့ ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှုကနေ ဘဝရပ်တည်လို့ရတဲ့ ငွေကြေးမျိုး မရတာ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အနုပညာနဲ့ နှီးနွှယ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတို့၊ စာပေ အလုပ်တို့ ဆိုတာတွေမှာ ပိုပြီးအတွေ့ရများပါတယ်။
ကိုယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ကနေ လုံလောက်သော ငွေကြေး မရရှိခြင်းဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကို သတ်တဲ့ လူသတ်သမားဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ထောင်မှာ တစ်ယောက်ဟာ ငွေကြေး လုံလုံလောက်လောက်မရှိဘဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်အောင် အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ရပ်တည်သွားနိုင်တာ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် အများသဘောတွက်ကြည့်ရင် ငွေကြေးဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားအဖြစ် သက်တမ်းရှည်ရှည်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း ရှိပါလျက်နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘဝ ပျက်သုဉ်းသွားပြီး မဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေမှာ ရောက်သွားတာဟာ ဘဝရပ်တည်မှုကိစ္စကြောင့် အဖြစ်များတာ တွေ့ရပါတယ်။
လူတော်တော်များများဟာ စားဝတ်နေရေးနဲ့ ဘဝရပ်တည်မှုခိုင်ခိုင်မာမာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ အလုပ်မှာ ကာလရှည်ကြာ ရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ချစ်လို့၊ ကိုယ်မြတ်နိုးလို့၊ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်လို့ ကိုယ်စေတနာပါပါ လုပ်ကိုင်တဲ့ ကိုယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ကနေ ငွေကြေး ရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ရှုမြင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာ မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ငွေကြေးအကြား ဘယ်လို မျှခြေညှိကြမလဲ…. ဆိုတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
လူ့အတ္တဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားဘက်ကို အမြဲတမ်း ယိမ်းနေတတ်လို့ များသောအားဖြင့် ကျင့်ဝတ်ဟာ ငွေကြေး အောက်မှာ ရောက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ တခါတရံ ဘဝမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရွေးချယ်မှု လုပ်ရတာတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ သာမန်အချိန်မှာတော့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ငွေကြေးဆိုတာကို မျှခြေညှိနိုင်မှ ကောင်းနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
အရသာရှိတဲ့ အသားဟင်းကောင်းတစ်ခွက်မှာ အချိုးအစားကျကျနန ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေပါ ဝင်နေပါတယ်။ တစ်မျိုးတည်းနဲ့ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ အရသာက မလေးမပင်၊ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လည်း မဟုတ်။ မငန် လွန်း၊ မပေါ့လွန်း။ သူနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အရသာမျိုးဖြစ်ဖို့ သင့်တင်စွာ ထည့်ပြီး ချက်ပြုတ်ရင် အရသာကောင်းတဲ့ ဟင်း တစ်ခွက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားဟာ ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကို ပစ်ပယ်လို့ မကောင်းပါဘူး။ ငွေကြေးကိုလည်း အလွန်အကျွံ ဦးစားပေးလို့ မရပါဘူး။ ကျင့်ဝတ်မရှိရင် မကောင်းသလို၊ ငွေကြေး မလုံလောက်ရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် …. အကယ်၍ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ငွေကြေး အပြိုင်ရွေးချယ်စရာများ ပေါ်လာရင် ကိုယ့်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ် မျှခြေညှိခြင်းဟာ ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးကို အပြိုင်မျှခြေညှိပြီး ရွေးချယ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
• ကျနော့် ပေတံဟာ ရှည်လွန်းနေရင် နားလည်ပေးကြပါ။
• ကျနော့် ပေတံဟာ တိုလွန်းနေရင်လည်း သည်းခံပေးကြပါ။
• လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲနိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိနေပါတယ်။
ည ၉း၃၂
၁၈ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ ၂၀၁၉ ။
Tagged Learning, Professional, Youth, ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္
Previous post သုတေသနဖန်ပြား
Next post စာအုပ်စာပေချစ်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား…